आइपिओ निष्काशन गरेका तीन कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाइ किन? यस्ता छन् कारण – OnlinePahar
आइपिओ निष्काशन गरेका तीन कम्पनीको शेयर सूचीकरणमा ढिलाइ किन? यस्ता छन् कारण
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:४२ Basanta Khanal	0 Comments	share suchikaran
जीवन विकास लघुवित्तले सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेको साउन ८ गते १७ दिन पुगेको छ। कम्पनीले असार २३ गते सर्वसाधारणलाई शेयर बाँडफाँट गरेको हो। मनकामना लघुवित्तले शेयर बाँडफाँट गरेको १० दिन पुग्यो। उसले असार ३० मा शेयर बाँडफाँट गरेको हो। उता युनियन लाइफले असार ३१ मा शेयर बाँडफाँट गर्‍यो। यी तीनै कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर बाँटफाँट गरेको भएपनि दोस्रो बजारमा अझै सूचीकृत गराएका छैनन्। यी तीनै कम्पनी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। सूचीकृत गराउनु पर्ने मध्येको जीवन विकास लघुवित्तले भने बिहीबार मात्रै नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरणको लागि निवेदन दर्ता गराएको छ भने अरू दुई कम्पनीले निवेदन समेत दिएका छैनन्। जीवन विकासले असारमा शेयर सूचीकरण गराउँदा दोहोरो शुल्क लाग्ने भन्दै साउन लगाएको बुझिएको छ। असारमा शेयर सूचीकृत गर्दा पुनः साउनमा नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले उसले सूचीकरण नै साउनमा पुर्‍याएको हो। जसले गर्दा उसलाई एक वर्षको सूचीकरण शुल्क कम लाग्ने छ। यसले गर्दा कम्पनीले सूचीकरणलाई साउनमा लगेको हो। बिहीबार दर्ता भएको कम्पनीको निवेदन उपर नेप्सेले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रक्रिया पुरा भए लगत्तै कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार सुचारु हुने नेप्सेको भनाई छ।
उता नेप्सेले चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि सूचीकृत कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया पेपर लेश गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि कम्पनीले पहिलो पटक नेप्सेमा आउँदा कुनै पनि कागजात ल्याउनु नपर्ने सिस्टम डेभलप गरेको छ। अब कम्पनीले सूचीकरणका सबै जसो कागजपत्र अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था शुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि सूचीकृत हुन चाहने नयाँ कम्पनीले अनलाइनबाटै सबै कागजात पठाउन सक्नेछन्। सोही कागजातको आधारमा नेप्सेले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। तर, कम्पनीले एकपटक भने नेप्से कार्यालयमा आधिकारिकताका लागि उपस्थित भने हुनुपर्नेछ। त्यस उप्रान्त भने सबै काम अनलाइनबाटै गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरेको नेप्सेको भनाई छ। नयाँ कम्पनीले पेपरलेस सुविधा पाउँदै गर्दा पुराना कम्पनीलाई समेत नेप्सेले चालु आर्थिक वर्षबाट कडी कडाऊ गर्ने भएको छ। सूचीकृत सबै कम्पनीले अनलाइन मार्फत बुझाउनु पर्ने कागजात नबुझाएका कारण ऊनीहरूलाई कडी कडाऊ गर्ने भएको हो। यस अघि नै कम्पनीको सूचना सबै नेप्से मार्फत नै उपलब्ध गराउन सकिने गरी नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वेबसाइटमा लगइन सुविधा दिएको छ। उक्त सुविधा प्रयोग गर्दै कम्पनीहरूले सबै जसो सूचना नेप्सेको वेभसाइटमा अपडेट गर्न सक्छन्। उनीहरूले अपडेट गरेको सूचना सर्वसाधारण लगानीकर्ताले समेत नेप्सेकै साइटबाट हेर्न सक्छन्।
सबै सूचीकृत कम्पनीका सबै विवरण एकै ठाउँबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले हेर्न सकियोस् भन्दै नेप्सेले यो सुविधा कम्पनीहरूलाई दिएको हो। तर, उक्त साइटमा केही कम्पनीले मात्रै आफ्नो सूचना अपडेट गर्ने गरेका छन्। धेरै जसोले उक्त सुविधा प्रयोगमा चासो दिएका छैनन्। जसले गर्दा नेप्सेले जुन उद्देश्य राखेर उक्त सुविधा दिएको त्यो प्राप्त नभएपछि नेप्सेले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई कडी कडाऊ गर्ने भएको हो। कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षबाट उक्त सुविधा प्रयोग नगरे कम्पनीहरूलाई पहिलो पटक सम्झाउने, त्यसपछि पनि अटेर गरे सूचीकरण विनियमावलिको अधिकार प्रयोग गरी कम्पनीलाई कारबाहीको दायरमा लैजाने बताएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूले नियमित आफ्ना गतिविधि र सूचनाहरू समयमै अपडेट गरिदिए सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई शेयर किनबेच गर्न सहज हुनुको साथै छुट्टा छुट्टै कम्पनीको सूचना लिन छुट्टा छुट्टै ठाउँमा धाइरहनु पर्ने समस्याबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले मुक्ति पाउने नेप्सेको जिकिर छ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०८ साउन २०७८ शुक्रवारको राशिफल पढौं
यसरी तिर्नुस् अनलाइनबाट सवारीसाधनको कर, (अब कर तिर्न कार्यालय धाउनु नपर्ने) →
मेरो सेयरका प्रयोगकर्ता तीन गुणाले बढे
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५३ Basanta Khanal	0
मानसिक अपांग छोरी गर्भवती हुने डरले अमा निरन्तर ३ महिने सुई लगाइदिन बाध्य!
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:२३ Basanta Khanal	0